Mna lula kuphila at my age. Ndiya kukhokela igqiza isempilweni ukuzonwabisa kwaye uyakuthanda isebenza, Ojikelezayo, ixesha elide uhamba phezu jikelele wam emangalisayo isixeko, kwi-indalo, kwi beach. Mna kanjalo bayathanda ukuhamba yi-car kwi-befuna beautiful iindawo. Ngamanye amaxesha, sifuna ukuva ukuba ubomi, ngamanye amaxesha ndonwabe kwaye ngamanye amaxesha ezibuhlungu, imikhosi yethu ekulweni kuba sisebenzisa nje, thobekileyo izicaka, kodwa xa zethu muscles, nerves kwaye iintliziyo k ubonakala ngathi exhausted, ixabiso lazo kanjalo ikhangeleka exhausted. Jikelele, ndinga zichaza ngokwam njengokuba agciniwe kwaye reliable umntu. Ndithanda intlanganiso abantu ukusuka zonke phezu kwehlabathi. Ndim indoda eyenze ezininzi umsebenzi ukwenza, kwaye ndim rhoqo kude ukusuka ekhaya. Ndiza watshata kwaye umfazi wam soloko ekhaya kunye abantwana, ngoko ke ndifuna ukuchitha ezininzi ixesha yedwa. Ndibathanda yakho dog. Ndibathanda lwasemaphandleni ubomi, indalo, izilwanyana, ukhenketho, ukufunda, Ojikelezayo, architecture, umculo (kwaye zonke bubonke climbing). Ndibathanda umculo kwaye utyelele kwi-snow skis. Wam passion ngu ukuhamba ngalo ilizwe zezethu kwaye kuba surprised kwakhona kwaye kwakhona nge-yalo ubuhle bendalo, ayo iyantlukwano kwaye abantu abo inhabit kuyo. Ndithanda ukuba bahambe. Mna ndililizwi kunye nemibutho yoluntu. Ndithanda ukuya kuhlangana izinto ezintsha kwaye abantu abaphila omkhulu yenkcubeko lemveli ukusuka zonke phezu kwehlabathi. Ndithanda Oriental cuisine, nto leyo ngenene okulungileyo kwaye isempilweni. Andikho apha ukudlala imidlalo. Ukuba mna ke apha kwi-imidlalo, ndinga ubeke phezulu iibhonasi iifoto. wam iifoto ingaba real kwaye bamele real, bazalwana iifoto ingaba nje, hayi ubudala, akunyanzelekanga ukuba ufuna ukuthetha ukuba abadlali, nceda ukuhlala kude kum. ukuba ndiza a oluntu ke, ukuba mna osetyenziselwa ukuchitha ezininzi ixesha kunye umsebenzi wam. Kodwa phezu iphelileyo, mna anayithathela bafunda ukuba ndiza wasting wam ezixabisekileyo ixesha. Ngoko ke waba ndonwabe kwi-ubomi bam, zifunyenweyo inyaniso iqabane lakho. Es. Ndinguye apha ukufumana iqabane lakho abo baya akhaphe kum kuba bubonke ubomi bam, andikho apha joke, ngoko ke nceda emke kum yedwa bonke girls abathanda ukudlala. Ndicinga ukuba ulwazi oninika inkululeko oyikhethileyo, ngoko ke ndifuna ukufunda okungakumbi malunga ubomi kunye nothando.
Ndine passion kuba imibala, ngu-ukwenzeka ukuba neglect ezi imiba. Nokuba ngabo masterpieces of nature okanye umntu, mna bona nabo bonke ngothando, admiration kwaye nzulu appreciation.
Le nto kum
Mna nento yokuba njenge yenza olutsha umhlobo. Ndithanda ukufunda malunga omtsha inkcubeko. Kwaye ndifuna ukuphucula wam isingesi. Ndifuna ukuya kuhlangana abantu ngenxa yam kwiwebhusayithi ye-esitsha ebomini. Ndidinga umntu ukuba end imihla yam. Andiyazi into nisolko ukucinga, kodwa ukuba ufuna izinto onomdla, wena awuyidingi ukuthumela zesintu, enkosi.
Hoping ukuva kuwe
Ndibathanda umculo, mna compete. Umntu kwi-ukulingana phakathi isizathu kwaye ubuchule lonto yenza umntu kwaye yeemvakalelo zakho ulwazi into authentic, njenge uxhulumaniso, kwixesha elizayo, kwaye mhlawumbi umtshato. Ndicinga ukuba ke kunokwenzeka. Omkhulu, hardworking, umdla, abaphila ne umfazi, ungathanda ukuba umsebenzi ngamanye States. Ndinqwenela ukufumana elungileyo umfazi esabelana ukwakha elizayo. Abaninzi zephondo ibango ukuba abe free, kodwa emva ukungenela kwabo, bamele burdened kunye surprising iindleko. Unxulumaniso Omnye yi free Dating inkonzo kwi-Italy, kunye nayo yonke imisebenzi kuba free kwaye akukho surprises. Oku kuthetha ukuba unako ukuthumela kwaye bafumana imiyalezo, incoko, imiyalezo ekhawulezileyo, blogs kwaye izithuba wethu indalo kodwa eyobuhlobo ngamazwe Italy kwaye Dating iiforam for free. Akukho ikhadi lebhanki letyala ezifunekayo. Akukho imirhumo, akukho amatyala, akukho vouchers, akukho jokes. Kuhlangana yakho entsha enye abahlobo ukusuka Italy namhlanje. Ukhe balingwe zonke iindlela zemveli ukufumana umntu othile kwi-Italy? Ingaba uvuma ne-Italian club iinkwenkwezi, babuyela ongenanto indlu, lonely uluhlu lophinda-phindo kuba isi-Italian romantics, restaurants, disastrous eyimfama imihla arranged yi-matchmaking abahlobo, isi-Italian clubs kuba icacile amaqela, omnye-kwi-omnye iziganeko kwaye iintlanganiso kunye akukho sizathu
← Beautiful Russian Abafazi ingaba Ulinde Wena. Ukungena for Free. Ikhangela abafazi - Russian girls
Ziza kuba free online intlanganiso ngaphandle ubhaliso genoacity in italy stopa →